Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Congenital Heart Disease မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ
ကလေးမှာ မွေးရာပါနှလုံးရောဂါလို့ ဆရာဝန်တွေက ပြောပါသလား။ မိခင်ဆိုရင် အနည်းဆုံး နားကြပ်နဲ့နားထောင်မှ တချို့ကို သိလာနိုင်တယ်။ တက်လို့ မရေးရ။ တက်ဆိုတာ အတန်းတက်တာ အတက်ရောဂါ။ တတ်ဆိုတာ ဖြစ်တတ်တ၊ စားတတ်၊ သွားတတ်တာ။
ကလေးဆုံးတော့မှဆရာဝန်ကပြောပြပါတယ် ကလေးမှာမွေးရာပါနှလုံးရောဂါရှိတယ်လို့ မွေးတုန်းက ဆေးရုံမှာမွေးပေမယ့် မပြောလိုက်ပါဘူးရှင့် G6PD လို့ပဲပြောပါတယ် ၂လနဲ့ ၉ရက်ရှိမှကလေးကဆုံးတာပါ
၂။ ဆရာရှင့် ကျမအသက် ၄၅ နှစ်ပါ။ ကျမမှာမွေးရာပါနှလုံး အပေါက်ပိုတခုရှိပါတယ်။ ဟိုအရင်က ဒေါက်တာ့့ နဲ့ ပြဘူးပါတယ်။ ခွဲမှပျောက်မယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့်တာဝန်မယူနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွက် မခွဲခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ မောလိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့ အခု ၄၅ နှစ် ရှိပါပြီ။ အခုတပါတ်လောက်ကစပြီးရင် ထဲမှာစူးပြီးအောင့်နေပါတယ်။ ကျမရောဂါ တော်တော်ဆိုးနေပြီလားဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
၃။ ကျွန်တော် မကြာခင် လက်ထပ်တော့မှာပါဆရာ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် ယူမယ့်အမျိုးသမီးက နှလုံးရောဂါ ရှိ်နေလို့ ကျွန်တော် ကလေးမယူချင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ အဲဒါ ယူပြီးကလေးမရအောင် သူရောဂါနဲ့သင့်တော်မယ့် ဆေးများရှိရင် ညွန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ။ မြန်မာပြည် မှာရနိုင်မယ်ဆေးမျိုးပေါ့ဆရာ။
၄။ ဆရာခင်ဗျာမွေးရာပါ နှလုံးအပေါက်ပါတဲရောဂါကိုခွဲစိတ်ကုသရင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။
၅။ ဆရာ သူငယ်ချင်းမလေးက ကလေးမွေးထားတယဆရာရယ်၊ သူ့ကလေးက တလရှိသွားပြီ။ နှလုံးခုန်မြန်လို့ ဆရာဆေးခန်းသွားပြပါတယ် ကလေးက နှလုံးမှာအပေါက်ပါတယ်ပြောတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ အဆို့ရှင်လားဆရာ၊ ဆေးပေးလိုက်ပြီးတလပြန်ချိန်းတယ်တဲ့။ မသက်သာရင် ခွဲရမယ်ပြောတယ်တဲ့။ စိုးရိမ်းပြီး တောတော် သောကရောက်နေရှာတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆရာကို မေးပေးမယ်၊ ဘယ်လို စောင့်ရှောက်ပေးရမယ် ဆိုတာကို။ သိပ်လဲဗဟုသုတရှိတဲ့ ကလေးတွေ လဲ မဟုတ်တော့လေ။ ဆရာအခု အချိန်မရရင် ပို့စ်လေးတခု ရေးပြီးတင်ပေးပါလားဆရာ
၆။ မွေးရာပါ နှစ်လုံးရောအကြောင်း ဆောင်းပါလေး သိဖွယ်လေး ဆေးပညာမှတ်စုလေးများရှိရင် ပို့ပေးစေလိုပါသည်။
ကမ္ဘာမှာ ၁၅ မိနစ်တိုင်း မွေးရာပါနှလုံးရောဂါနဲ့ကလေးတယောက် မွေးနေတယ်။
မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ အများစုကို ဘာလို့လာဖြစ်သလဲ ဆရာဝန်တွေ မသိကြပါ။ ဒါလိုမျိုးရောဂါတွေကို တွေ့တိုင်း ကံတရားရဲ့သဘောကို နားလည်အောင်၊ ကံကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ဘို့ တွန်းအားတွေ ရလာစေတယ်။ စာဖတ်သူများကိုလည်း အလေးအနက် တိုက်တွန်းပါရစေ။
၁။ Genetic or chromosomal abnormalities မျိုးဗီဇ ဒါမှမဟုတ် ခရိုမိုဇုန်း ချို့ယွင်းချက်၊ ဥပမာ Down syndrome ဒေါင်-ဆင်ဒရုပ်း၊
၂။ Taking certain medications or alcohol or drug abuse during pregnancy တချို့ဆေးးတွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံး သုံးစွဲလို့၊
၃။ Maternal viral infection ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးဝင်လို့၊ ဥပမာ ကိုယ်ဝန် ပဌမ ၃ လအတွင်းမှာ rubella (German measles) ဂျာမန် ဝက်သက်ဖြစ်လို့။
မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ မွေးမွေးချင်း လက္ခဏာခံစားရတာ၊ နဲနဲကြီးလာမှ ခံစားရတာ မတူပါ။ တချို့ဆိုရင် ရောဂါပါလာမှန်း မသိဘူး။ အမေရိကားမှာ ကလေးပေါင်း ၅ သိန်းရှိတယ်။ အမျိုးထဲမှာ ကလေးတယောက်က ဒါမျိုးရှိရင် နောက်ကလေးလဲ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတာတွေ့ရတယ်။
အဖြစ်များတဲ့ အမျိုးအစားတွေ -
၁။ Heart valve defects နှလုံးအဆို့ရှင်ချို့ယွင်းချက်များ၊ အဆို့ရှင် ကျဉ်းနေတာ၊ လုံးဝပိတ်နေတာ၊ မလုံတာ၊
၂။ Defects in the walls between the atria and ventricles of the heart နှလုံးအခန်းတွေကြားက အကန့်မှာ အပေါက်ဖြစ်နေတာ၊ ဥပမာ Atrial septal defect (ASD) နဲ့ Ventricular septal defect (VSD) များ၊ မေးတဲ့ကလေးမှာ VSD ဖြစ်နေပါတယ်။
၃။ Heart muscle abnormalities နှလုံးကြွက်သား အားနည်းခြင်း။
Congenital Heart Defects in Children ကလေးမွေးရာပါနှလုံးရောဂါများ
1. Patent ductus arteriosus (ဏီဗ) (ပေးတင့် ဒတ်တပ်စ်-အာတီရီယိုးဆပ်စ်)
2. Tetralogy of Fallot နှလုံးချို့ယွင်းချက် ၄ မျိုးတွဲရှိခြင်း၊
3. Transposition of the great vessels နှလုံးသွေးကြောကြီးများ နေရာလွဲနေခြင်း၊
4. Coarctation of the aorta နှလုံးသွေးကြောမကြီး တနေရာမှာကျဉ်းနေခြင်း၊
5. Heart valve problems နှလုံးအဆို့ရှင်များ မကောင်းခြင်းများ။
ဆရာဝန်ကနေ နားကြပ်နဲ့ နားထောင်တာနဲ့လဲ တချို့နှလုံးရောဂါကို သိတယ်။ Heart murmur ဆိုတဲ့အသံကိုကြားရတယ်။ သေချာစေအောင် ဒါတွေဆက်စစ်ဆေးနိုင်တယ်။
• Echocardiogram or transesophageal echocardiogram (TEE)
• Electrocardiogram (ECG or EKG)
နှလုံးမှာ ရောဂါရှိနေတာကို ကလေး မမွေးခင်ကတည်းက သိအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ မွေးပြီးမှလဲ အချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်။
၁။ Shortness of breath အသက်ရှူမဝတာ၊
၂။ Limited ability to exercise သွားလာ လှုတ်ရှား၊ အလုပ်လုပ်တာ သူများလို၊ အရင်လို မလုပ်နိုင်တာတွေ တွေ့ရလိမ့်မယ်။
• Cyanosis နုတ်ခမ်း၊ လက်သည်း၊ အရေပြား ပြာနှမ်းနေခြင်း၊
• Fast breathing အသက်ရှူမြန်နေခြင်း၊
• Poor feeding အစားအစာ ကောင်းကောင်းမစားခြင်း
• Poor weight gain ကိုယ်အလေးချိန် အတက်နှေးခြင်း၊
• Recurrent lung infections အဆုပ်ခဏခဏရောင်ခြင်း၊
• Inability to exercise ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှု ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ခြင်း၊ မဆော့နိုင်ခြင်း။
• တချို့ကဆေးကုဘို့ တကူးတက မလိုကြပါ။ တချို့ဆေးပေးမယ်။ တချို့က ခွဲစိတ်ရမယ်။ တသက်တာ နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြသ၊ စစ်ဆေး၊ ကုသမှုလိုတတ်တယ်။
• မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါရှိနေသူတိုင်းမှာ လာဖြစ်တတ်တဲ့ Endocarditis နှလုံးသားရောင်တာမျိုးက ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ နှလုံးခွဲစိတ်ရသူတွေမှာ ပိုသတိထားရမယ်။
လည်ချောင်းနာရင်၊ ဖျားရင်၊ ကိုယ်လက်တွေကိုက်ခဲရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ သွားနုတ်စရာ၊ ခွဲစိတ်စရာရှိရင် Antibiotics ပဋိဇီဝဆေး သောက်ရမယ်။
• Amoxicillin လူကြီး =2g နဲ့ ကလေး = 50 mg/kg
• ပါးစပ်ကမသောက်နိုင်သူများအတွက် Ampicillin2g IM or IV ကလေး = 50 mg/kg IM or IV သို့မဟုတ် Cefazolin 1 g IM or IV သို့မဟုတ် Ceftriaxone ကလေး = 50 mg/kg IM or IV
• ပနယ်စလင် မတည့်သူများ Cephalexin2g 50 mg/kg သို့မဟုတ် Clindamycin 600 mg ကလေး = 20 mg/kg သို့မဟုတ် Azithromycin သို့မဟုတ် Clarithromycin 500 mg ကလေး = 15 mg/kg
• ပါးစပ်ကမသောက်နိုင်သူများအတွက် Ampicillin သို့မဟုတ် Cefazolin သို့မဟုတ် Ceftriaxone2g IM or IV1 g IM or IV ကလေး = 50 mg/kg IM or IV50 mg/kg IM or IV
• ပနယ်စလင် မတည့်သူများ၊ ပါးစပ်ကမသောက်နိုင်သူများအတွက် Cefazolin or ceftriaxone or Clindamycin 1 g IM or IV600 mg IM or IV ကလေး = 50 mg/kg IM or IV20 mg/kg IM or IV
1. Acute Heart Attack Treatment ရုတ်တရက် နှလုံးအတက်ရရင် ဘာလုပ်ရမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/cute-heart-attack-treatment.html
2. ASD (1) နှလုံးအပေါက် (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/atrial-septal-defects-asd.html
3. ASD (2) နှလုံးအပေါက် (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/asd-2.html
4. Atrial Septal Defects (ASD) နှလုံး-အပေါက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/atrial-septal-defects-asd.html
5. Congenital Heart Disease မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/congenital-heart-disease.html
6. CPR for newborn babies မွေးကာစကလေး CPR လုပ်ပေးနည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/cpr-for-newborn-babies-cpr.html
7. Heart attack vaccine နှလုံးရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို အိန္ဒိယမှာ စမ်းသပ်ရန်ရှိ http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/heart-attack-vaccine.html
8. Heart Attack နှလုံးအတက် သတင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/heart-attack.html
9. Heart Cancer နှလုံးကင်ဆာ ဘာလို့မဖြစ်တာလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/heart-cancer.html
10. Heart disease (1) နှလုံးရောဂါ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/heart-disease-1.html
11. Heart disease (2) နှလုံးရောဂါ (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/heart-disease-2.html
12. Heart disease (3) နှလုံးရောဂါ (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/heart-disease-3.html
13. Heart Hole နှလုံးမှာ အပေါက်ပါနေတာရှင့် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/heart-hole.html
14. Human Heart လူ့နှလုံး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/human-heart.html
15. IHD နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/ihd.html
16. Ischemic Heart Disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/cute-heart-attack-treatment.html
17. Mitral valve prolapse နှလုံးအဆို့ရှင် ကျွံခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/mitral-valve-prolapse.html
18. Myocardial ischemia နှလုံးသား သွေးမဝခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/myocardial-ischemia.html
19. Valvular Heart Diseases နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/valvular-heart-disease.html
20. Viagra in Heart Disease နှလုံးရောဂါ နဲ့ (ဗိုင်ယာဂရာ) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/viagra-in-heart-disease.html